अन्तरिक्षमा होटल: यस्ता छन् सुविधा, प्रतिव्यक्ति खर्च कति ? - Sidha News
अन्तरिक्षमा होटल: यस्ता छन् सुविधा, प्रतिव्यक्ति खर्च कति ?
एजेन्सी। अन्तरिक्षमा पर्यटनलाई बढावा दिन धेरै कम्पनीहरूले पछिल्लो समय होटल निर्माण गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अन्तरिक्षमा निर्माण गरिने यी होटेलहरूमा पर्यटकहरुका लागि सुविधाजनक कोठा समेत उपलव्ध हुने जनाइएको छ ।
अन्तरिक्षमा होटल निर्माण गर्न कानूनी बाधा पनि आउन सक्छ । सोही कानुन (बाह्य अन्तरिक्ष सन्धि) अनुसार सन् १९६७ मा अन्तरिक्षमा हुने गतिविधिलाई नियन्त्रण समेत गरिएको थियो । यस सन्धिअनुसार कुनै पनि देशले एकतर्फी रुपमा अन्तरिक्षका स्रोतहरूको शोषण गर्न पाउँदैन । यो सन्धि विशेषगरी अन्तरिक्षलाई हतियार मुक्त बनाउनका लागि बनाइएको हो, होटेल र छुट्टीको लागि होइन । यस सम्झौतामा अमेरिका, रुस लगायतका १ सय ५ देशले हस्ताक्षर गरेका छन्।